Microwave cheesecake, dessert yakapusa. | Kicheni Mapepa
Montse Morote | 17/08/2021 09:00 | Delicatessen, Keke
Microwave cheesecake, keke, yakapusa nyore uye nekukurumidza. Muzhizha iwe hausi kunyatsoda kubatidza ovhoni, asi iwe unoda chimedu chekeke kuti uperekedze kofi, ndosaka tichifanira kutsvaga nzira iri nyore yekuita madhiri senge ari mu microwave.
Dhizeti inonaka uye yakapusaIinewo chinotapira saka chakareruka. Iyo yakanaka kwazvo uye yakasviba keke.
Sezvo iri keke rakachena chena, unogona kumwaya icing shuga, sinamoni kana kuputika kwemvura caramel.
Kubika nguva: 7 M
200 gr. kuparadzira chizi
30 gr. hupfu hwechibage (Maizena)
1 teaspoon vanilla flavoring (kusarudza)
2-3 mashupuni echinotapira kana shuga (6 mashupuni)
1-2 icing shuga, sinamoni
Kugadzirira cheesecake mu microwave, tinogona kushandisa blender kana robhoti kushandisa iyo yogati, yakapararira chizi, mazai, chibage, hwema hwevanilla uye chinotapira kana shuga. Isu tinochengetera iyo icing shuga kana sinamoni.
Tinorova zvakanaka kusvika zvese zvanyatsosanganiswa.
Kana zvese zvinhu zvanyatsosanganiswa uye zvakapwanyika, pasina kusiya mapundu, tinotora muforoma yakakodzera microwave, iri padiki padiki. Isu tinosanganisa ese musanganiswa. Pano unogona kuravira musanganiswa zvishoma kuti uone kana uchiufarira uchitapira. Ini ndinongoisa 2 mashupuni eanotapira mairi.
Tichaisa chakuvhe nemusanganiswa mu microwave pasimba remagetsi (950W) kwemaminitsi manomwe, kana microwave ikamira, tinoirega ichizorora kwemaminitsi gumi mu microwave. Isu tinoiburitsa, regai ichidziya ndokuisa mufiriji.
Patinoenda kunoutora kana kuushandisa, kumwaya neshuga kana sinamoni.
Uye tichava nazvo zvakagadzirwa kuti tidye. Iwe unogona zvakare kuendesa pamwe nemichero jam.
Yakazara nzira kuchinyorwa: kudzidziswa » Shamwari » Delicatessen » Microwave cheesecake